७ महिनामा भ्रमण र उपचारमा राज्यकोषको १० करोड रुपैयाँ सिध्याए प्रधानमन्त्री ओलीले
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्च र नेता कार्यकर्ताको उपचारमा राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीदेखि मन्त्री, सांसद, प्रशासक, राजनीतिक दलका..
काठमाडौं । करिब सात वर्षअघि अस्ट्रेलियाको भिसा लागेपछि नवलपरासीका युवराज अधिकारी ‘पेपर म्यारिज’ गरी प्रेमिकालाई पनि ‘डिपेन्डेन्ट’ भिसामा अस्ट्रेलिया लिएर गए । अस्ट्रेलिया पुगेर धुमधामसाथ बिहे गरे । करिब दुई वर्षको..
काठमाडौं । एनसेलका प्रमुख कार्यकारीले कानुनको पालना नगरी बिजनेस भिषामा यहाँ काम गरिरहेको खुलासा भएको छ । एनसेलको व्यवस्थापन टेलियाबाट एक्जियता, मलेसियामा हस्तान्तरण भएपछि आएका सीईओ सिमोन पार्किन्सले वर्किक भिषा लिएर..
​वातावरण संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका प्रयास र वातावरणीय सन्तुलनलाई सँगसँगै लैजानु जरुरी रहेको बताएका छन् । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले..
​हानले त्रिभुवन विमानस्थलमा १० लाख लगानीमा सुन्दर बगैंचा बनाउने
काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय वमिानस्थल प्रवेशद्धारमा बागबगैंचा तथा साजसज्जा गरी सुसज्जित बनाउने भएको छ । हानले आफ्नो पचासौं वर्ष गाँठको अवसर पारेर १० लाख भन्दा..
मोरङ । राजस्व नतिर्ने विराटनगरका एक दर्जन ठूला करदातालाई विराटनगर उपमहानगरपालिकाले कारबाही सुरु गरेको छ। नगर क्षेत्रमा रहेर घर, जग्गा कारोवार र व्यवसाय कर नतिर्ने ठूला करदातालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही सुरु..
नक्कली लाइसेन्स बनाउने १५ जना पक्राउ
बनेपा । नक्कली लाइसेन्स बनाएर सवारी साधन चलाउने १५ जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रामेछापको गेलु गाविस–९ बस्ने मीनबहादुर थापामगर, धादिङको किरनचोक गाविस–४ बस्ने आयुष मोक्तान, काभ्रेपलाञ्चोकको महाकालचौर गाविस–८ बस्ने..
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीको क्रिडास्थल बन्न सक्ने चेतावनी
काठमाडौ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाल कमजोर सुरक्षा प्रणालीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनहरुको क्रिडास्थल बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा भइरहेको आतंकवादी समस्याका सम्बन्धमा शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा अमेरिकी..
झुट खोतल्दै पोलिग्राफ मेसिन, तीन सय ८५ अभियुक्तले ढाँटेको पुष्टि
काठमाडौं । कुटपिट गरेर तथा धम्क्याएर अभियुक्तलाई घटनाबारे बोल्न लगाउने प्रहरीको अनुसन्धान शैली फेरिँदै गएको छ। अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले झुटो बोलेको पत्ता लगाउने आधुनिक पोलिग्राफ प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ। दुई..
द्वन्द्वकालका घटना : दोषी सबैलाई कारवाही गर्ने पक्षमा देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैखाले मानव अधिकार उल्लङ्घन एवं हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याईने आश्वासन दिएका छन् । द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले हिंसात्मक..
एलजीले ४० तल्ला अग्लो तासको घर निर्माण गरेर विश्व रेकर्ड बनायो
काठमाडौं । एलजीले सबैभन्दा अग्लो तासको घर बनाएर गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेको छ । २०१६ मार्च १५ मा आर्किटेक्ट ब्रायन बर्ग र एलजी मिलेर सबैभन्दा अग्लो तासको घर बनाएका..
एमालेको कार्यालय भत्काउन ३१ लाख रुपैया
काठमाडौं । नेकपा एमाले कार्यालय व्यवस्थापन कार्यदलले भूकम्पले क्षति भएको कामनपा–१४, मदननगर बल्खुस्थित पुरानो कार्यालय भत्काई सफाइ गर्न ठेक्का दिएको छ । कार्यदलका संयोजक प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा..
​पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्यो ढिलासुस्ती, विकास समितिको आपत्ति
काठमाडौं । वर्षा शुरु हुन लाग्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्, विकास समितिले आपत्ति जनाएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका नाममा कागजी..
१५ वर्ष बितेपनि दरबार हत्याकाण्ड अझै ‘रहस्यमय’
काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा कालरात्रीका रुपमा चर्चित दरबार हत्याकाण्ड भएको १५ वर्ष बितेपनि त्यससँग जोडिएका थुप्रै घटनाक्रम ‘रहस्यमय’ नै छन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यलगायत राजपरिवारका १० सदस्यले ज्यान गुमाउनुपरेको त्यो..
ओलीले भने प्रचण्डलाई किन प्रधानमन्त्री बनाउने? भद्र सहमति भनेको के ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट पास भएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै भद्र सहमति नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दा एमालेकै नेतृत्वमा हुने भन्दै उनले नभए यो सरकारले..
निम्नस्तरका कर्मचारीको तलब एकमुस्ट वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग
काठमाडौँ । सोमबार मात्रै एकीकृत भएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन र राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले न्यूनस्तरका कर्मचारीको भावनालाई सम्बोधन गर्दै १० हजार रुपैयाँको दरले तलब वृद्धि गर्न माग गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद..
​अमेरिकी अर्थत्रन्त्रमा नसोचिएको बद्धि
अमेरिका । वर्षको शुरूमा सुस्त रहेको अमेरिकी अर्थतन्त्रले पहिलो त्रैमासमा गति लिएको छ । उपभोक्ता खर्चमा भएको वृद्धि र उत्साहजनक घरजग्गा व्यवसायका कारण पहिलो त्रैमासमा अमेरिकी आर्थिक वृद्धिदर यसअघि बताइएभन्दा..
अर्थविद तथा उद्योगी ब्यवसायीहरु बजेटबारे को के भन्छन्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७३-०७४ को बजेटबारे अर्थविद तथा उद्योगी ब्यवसायीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ट उपाध्यक्ष भवानी राणा निजी क्षेत्रको माग..
​कर्मचारीको तलब बढ्यो, अब कसको कति ?
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशतले बृद्धि गरेपछि मुख्यसचिवको तलब रु ५४ हजार ५८८ पुगेको छ भने कार्यालय सहयोगीको तलब रु १६ हजार २२५ पुगेको छ । सरकारले..
काँग्रेसले बैठक नै राखेर किन माग्यो ? अर्थमन्त्री पौडेलको राजिनामा
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले 'आर्थिक अनुशासन तोडेर ल्याइएको' आव २०७३-७४ बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बजेटको विषय जोडेर काँग्रेसले अर्थमन्त्रीको राजिनामा समेत माग गरेको छ। व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ..
काठमाडौँ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को आयव्ययको अनुमानमा सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । बजेटअनुसार शिक्षामा रु एक खर्ब, १६ अर्ब, ३६ करोड, छ..
साढे १० खर्बको लोकप्रिय बजेट ५९ प्रतिशत साधारण र ३० प्रतिशत विकास
काठमाडौं । सरकारले चालू वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा ५० प्रतिशतले आगामी वर्षको बजेट आकार बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित ८ खर्ब १९ अर्बमध्ये सरकारले ७ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ..
​नयाँ बजेट शनिबार सार्वजनिक हुँदै, १० खर्ब बढिको बजेट आउने, कर्मचारीको तलब बढने अनुमान
काठमाडौं । सरकारले शनिबार (भोलि) आगामी आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै । अघिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्य असार अन्तिम सातातिर बजेट घोषणा गर्ने गरिन्थ्यो । नयाँ संविधानमा बजेट समयमै पारित..
​खडेरीले गर्दा सुदूरपश्चिममा खाद्य सङ्कट, १ लाख ३० हजारबढी घरधुरी के खाने
बैतडी । लगातारको खडेरीले सुदूरपश्चिममा खाद्य सङ्कट हुने सङ्केत देखा परेको छ । धेरैजसो क्षेत्रमा किसानले हिउँदे बाली लगाउनै नपाएको र लगाएको ठाउँमा समेत यो वर्ष उत्पादनमा भारी गिरावट आएको..
विदेशमा रहेका पतिको श्रीमती भगाउन छोराछोरीको हत्या गरी घरमा आगजनी
बागलुङ । गत वैशाख १४ गते आगलागीमा परी मृत्यु भएका भनिएका जिल्लाको बोहोरागाउँ–७ सानोजिरीका दुई बालबालिकाको हत्या भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। सन्तबहादुर घर्तीका ६ वर्षीया छोरी समुन्द्र घर्ती र..
​एक बर्षमै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ थपियो शेष घले दम्पत्तिको सम्पत्ति, सूचीमा १०५ औं नम्बरमा
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाका धनाढ्यहरुको सूचीमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले र उनकी पत्नी जमुना गुरुङको सम्पत्ति यो बर्ष ५ करोड ८० लाख डलर ९करिव ४ अर्ब ४६ करोड..
​सरकारले सदनमा पेस गरको आर्थिक सर्वेक्षणान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ०.७७ प्रतिशत बृद्धि
काठमाडौं । सरकारले सदनसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को आर्थिक सर्वेक्षण आज प्रस्तुत गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार चालु आवमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ० दशमलव ७७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको..
धुर्मुस-सुन्तलीलाई पुनर्निर्माण अभियानका लागि सिटी एक्सप्रेसको साढे १५ लाख
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरले ‘गिरान्चौर एकीकृत नमूना वस्ती’ निर्माणका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई साढे १५ लाख सहयोग गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रम गरी सिटी एक्सप्रेसका प्रवन्ध निर्देशक चन्द्र..
​ट्राफिकद्वारा करिब २२ लाख राजस्व सङ्कलन
मेलम्ची । चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले २१ लाख ८९ हजार ८०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सवारी चालकपत्रबिना सवारी चलाउने, मापसे गरी सवारी चलाउने जस्ता विभिन्न ट्राफिक..
​संसद बैठक बस्दै, अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने
काठमाडौं । सरकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७२-७३को मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिको मूल्याङ्कनसहित आर्थिक सर्वेक्षण विहीबार संसदमा पेस गर्दैछ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवस्थापिका संसदको बिहीबारको बैठकमा चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षण पेस..
Results 1994: You are at page 48 of 67